မော်ကွန်းတိုက် chairlift - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Hakkari အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Idris Akbýyýk, 2.500 မြင့်သည့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏ Butane ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးပေါင်းမည်နှင့်အသစ်လုပ်ခံရရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာတွေ့ရှိချက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mustafa Pasa, အကြီးအစိုးရရှေ့နေ Mustafa ငါး, ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Mustafa ငြိမ်, ဒုတိယပြည်နယ် Gendarmerie တပ်မှူးဗိုလ်မှူးကြီး [ပို ... ]
အဆိုပါ2650 တထောင်မြင့်ကုန်းပြင်မြင့်၌အမှန်တရားaratmadı, ဆောင်းရာသီအားကစားနှင့်နှင်းလျှောစီးစင်တာÇambaşıစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း၏ဧကပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရမည်Çambaşı။ ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဇာတ်လမ်းအမြင့်အတွက်သူ့အဖွဲ့ 25 မီတာ၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းလိုအပ် [ပို ... ]
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Isparta ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်5/ 2017 JCC ၏ဆောက်လုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြုသောအမှု Davraz တောင်တန်းဆောင်းရာသီခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစင်တာတွင် 31237 အမှတ်စက်မှုစက်ရုံနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေး (overhead ပါဝါဓာတ်အားလိုင်းများမှမြေအောက်ယူခွငျးအားဖွငျ့အပိုဆောင်း Transformer စက်ရုံ) [ပို ... ]
Sarıkamışနှင်းလျှောစီး Center ကနှင်းလျှောစီးလေလံ Done အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ: အ chairlift Sarıkamışနှင်းလျှောစီး Center ကကန်ထရိုက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ32 လအတွင်းအပေါ်ပြီးစီးခဲ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထား။ Sarikaya Cibiltepe နှင်းလျှောစီး2။ အားဖြင့်ခွဲထွက်ရေးကြောက်မက်ဘွယ်သောအအဖှဲ့အစညျး၏အထက်ပိုင်းဇာတ်စင်ပေါ်တွင် 13 စက်တင်ဘာလ 2015 ဘူတာရုံများတွင် [ပို ... ]
Trabzon အရေးပေါ်ကေဘယ်လ်ကားဆောက်လုပ်ရေးမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှာဖွေခြင်း: နောက်နှစ်အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွက် Trabzon 2504 Çakırgölမြင့်ကုန်းပေမယ့်ပျောက်ဆုံးပြီးပါကတစ်ဦးအကြီးလမ်း, အဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလည်းတစ်ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Trabzon လက်ထောက် Faruk AK ပါတီစေမည် .. [ပို ... ]
ရာသီသစ်စခန်းများအတွက်ဆက်လက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများယနေ့ cable ကိုကားတစ်စီးစီးမှာစိတ်ဖိစီးမှုပစ်ချစဉ် Trabzonspor Isparta Davraz: Trabzonspor Davraz စခန်း၏စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကေဘယ်လ်ကြိုးကားကို sightseeing သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ Isparta Davraz အတွက်ရာသီသစ် Trabzonspor ကစားသမား Davraz စခန်းများ၏ဖိစီးမှုကိုအဘို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ [ပို ... ]
အဆိုပါ KDV 2023 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်ရွယ်ချက်များမှကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန်ရထားလမ်းစနစ်ကရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည် KDV ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရလိမ့်မည်။ မက်လုံးကိုလည်းစည်ပင်သာယာအစိုးရအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်, အလုပ်၏နယ်ပယ်ထဲမှာ 2023 ရထားလမ်းအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းများအတွက် KDV ကင်းလွတ်ခွင့်များအတွက် button ကိုတွန်း။ ထို့ကြောင့် [ပို ... ]
အဆိုပါ chairlift ကဘာလဲ? သူအလုပျသမားစခန်းများနှင့်အခြေချနေထိုင်မှုအကြားတည်ရှိသောအများစုနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၏ပုံစံထဲမှာ, ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌသေးငယ်တဲ့ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုလေယာဉ်အမျိုးအစားပုံစံများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ပုံစံအချို့နိုင်ငံများတွင်ခေါ်ကောင်းကင်ကြိုး cable ကိုကားများသို့မဟုတ်။ [ပို ... ]